पेड्रो नेटलटहु स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू मिलान Skriniar बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो मिलान Skriniar जीवनी तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, परिवार जीवन, प्रेम जीवन विवरण प्रदान गर्दछ।प्रेमिका र पत्नी तथ्यहरु), भाई, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली। हामी तपाईंलाई पनि दिन्छौं महत्त्वपूर्ण घटनाहरू ठीक जबदेखि उनी लोकप्रिय भइनन् भनेर जान्दैनथे।
हो, सबैलाई थाहा छ केन्द्र फिर्ता कडा ट्याकलर हो जो सफा गर्न छिटो हुन्छ. यद्यपि, धेरैले मिलन स्क्रिनियारको जीवनी पढेका छैनन, जसले उनको जीवनमा चाखलाग्दो थोरै ज्ञात घटनाहरूको पूरा विवरण दिन्छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मिलान Skriniar बचपन कहानी:
बायो स्टार्टर्सका लागि, फुटबलर स्लोभाक हो। उहाँ फेब्रुअरी १ ​​11 1995 the को ११ औं दिनमा स्लोभाकियाको शहर इयार्ड नाद ह्रोनममा जन्मनुभएको थियो। मिलन आफ्नो सानो चिनिएको आमा र fatherubomír rinkriniar नाममा जाने आफ्नो बुबाको लागि दुई बच्चा भन्दा कम दुई मध्ये एक हो।
मिलान Skriniar परिवार मूल:
केन्द्र फिर्ता स्लोभाकिया जन्म को सद्गुण द्वारा छ। उसको पारिवारिक जरामा गरिएको अनुसन्धानको नतिजाले उनी स्लोभेन्स्का जातीय समूहको हुने सम्भावना औंल्याउँछ। स्लोभाकियाको धेरैजसो जातीय समुदायमा दबदबा छ।
मिलान Skriniar बढ्दो वर्ष:
भविष्यका पेशेवर फुटबलर एक ठूलो भाइको साथ इअर नाद ह्रोनममा उनको जन्म शहरमा हुर्किए। सहरमा हुर्किएकी, मिलानको केवल एउटा बाल्यकाल सपना थियो। उसको सपना फुटबलर बन्ने र धेरै ठूलो क्लबहरूको लागि खेल्ने थियो।
मिलान Skriniar परिवार पृष्ठभूमि:
सत्य भन्ने हो भने, स्लोभाकको फुटबल सपनाको तथ्यसँग यसको केही सम्बन्ध थियो कि उहाँ खेलमा उत्कट परिवारमा जन्मिनुभयो। वास्तवमा, मिलानका बुबा एक पूर्व फुटबलर थिए जबकि उनका जेठो भाइले खेल खेल्ने इतिहास रहेको छ।
कसरी करियर फुटबल मिलन Skriniar को लागी:
यसप्रकार, यो अचम्मको कुरा होइन कि उसले १० वर्षको उमेर भन्दा पहिले स्थानीय पक्ष Žiar nad Hronom संग प्रशिक्षण सुरु गरे। मिलान १२ बर्षको उमेरमा, उनले आफ्नो स्थानीय क्लबलाई MŠK inailina संग व्यग्र क्यारियर निर्माण शुरू गर्न छोडे।
यो MŠK इलिना मा थियो कि फुटबल उन्माद आफ्नो क्यारियर को धेरै वर्ष खर्च कौशल कौशल सेट कि उसलाई ठूलो क्लब लागि खेल्ने उसको सपनाको नजिक ल्याउने थियो। इलिनासँग आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, मिलनले क्लबको लागि पहिलो टीम टोलीमा डेब्यू गरे जुन स्लोभाक सुपर लिगा खेलमा एफसी वाओन जा्लाट मोराभिस बिरुद्ध थियो। उनलाई पछि loanणमा क्लब पठाइयो।
मिलान Skriniar जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
के तपाईंलाई थाहा छ कि जवान स्लोभाकले फुटबलमा आफ्नो क्यारियर निर्माणको शुरूआत निर्दयी हमलावरको रूपमा गरे जसले विपक्षको बचावलाई अगाडि सताए? जे होस्, ऊ MŠK सिलिनाको एक मिडफिल्डर भयो।
फुटबल प्रतिभाको स्थितिमा पछिका परिवर्तनहरूले उनलाई Zlat back Moravce (२०१)) र इटालियन साइड Sampdoria मा एक केन्द्रको क्षमतामा खेल्न अनुकूलन गरेको थियो जहाँ उनीसँग एक वर्षको जादू (२०१-2013-२०१2016) थियो।
मिलान Skriniar को जीवनी- प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
जब केन्द्रले अन्ततः अन्ततः मिलनको लागि सम्पादोरिया छोडे, उनको आगमनले मुख्य समाचारहरू छोयो किनभने २० मिलियन डलरको ट्रान्सफर शुल्कले उनलाई सबै समयको सबैभन्दा महँगो स्लोभाक खेलाडी बनायो।
धेरै भन्न जरूरी छैन, केन्द्र फिर्ता नेराज्जुरीसँग उसको पहिलो सत्र (२०१ 2017-२०१।) मा प्रभावशाली थियो र छ वर्षमा पहिलो पटक यूईएफए च्याम्पियन्स लिगमा स्थान सुरक्षित गर्न मद्दत गर्‍यो। बाँकी उनीहरू भन्छन् कि ईतिहास हो।
मिलान Skriniar प्रेम जीवन- प्रेमिका, पत्नी, बच्चाहरू?
त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसको लागि स्लोभाकको मुटु धड्किन्छ। ती मध्ये एक उनकी प्रेमिका र मोडेल बार्बोरा ह्रोन्सेकोवा हुन्। प्रेमबर्ड्स जोडी भएको छ किनकि मिलान सम्पादोरियाको लागि खेलिरहेको थियो।
थोरै अझै मिलानको लागि श्रीमती भएकी छैन, बार्बोराको इन्स्टाग्राम पृष्ठले उनको उपनामको साथमा उसको उपनाम पनि देखाउँदछ। दुबैमध्ये कोही पनि छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) बाहिर विवाहको बाहिर छन र यो समयको कुरा मात्र हुनेछ उनीहरूको लागि विवाह घण्टी बज्यो।
मिलान Skriniar परिवार जीवन:
डिफेन्डरको प्रेमिका तस्वीरमा आउनु भन्दा पहिले उनका बुवा, आमा र अन्य परिवारका सदस्यहरू उसले पाएको १०० प्रतिशत प्रेम र समर्थनको स्रोत हुन्। हामी तपाइँलाई मिलान स्क्रिनियारका बुबा र आमाका साथै उनका भाई-बहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू हामी ल्याउँदछौं। थप विज्ञापन बिना, प्रगति गर्न दिन्छ।
मिलान Skriniar आमा बुबा को बारे मा:
सुरू गरेर, íubomír rinkriniar फिर्ता केन्द्रको बुबा हो। उहाँ एक पटक एक एमेच्योर फुटबलर हुनुहुन्थ्यो र केन्द्रलाई पछि फिर्ता खेलको लागि एक अनन्त जोश विकास गर्न मद्दतको लागि निश्चय पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ।
समेत मिलान Skriniar को बायो राख्न को समय मा, आफ्नो बुबा अझै पनी आफ्नो छोराको प्रदर्शन को एक विशेषज्ञ विश्लेषण राख्छ र उसलाई सफल गर्न कुनै संग रोक्न कहिल्यै। उनको तर्फ, केन्द्र फिर्ता आमाको बारेमा धेरै थाहा छैन। तर उनी यस केन्द्रका पछाडिको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग सामेल हुने तथ्यलाई अस्वीकार गरिदैछ।
मिलान स्क्रिनियारका भाई-बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
केन्द्रीय डिफेंडर केवल उनको आमा र बुबासँगै हुर्किएन। मिलान स्क्रिनियारका अभिभावकहरू भन्दा टाढा, उहाँसँग एक सानो ज्ञात भाई छ जो फुटबलमा पनि थिए तर एक पेशेवरको रूपमा समाप्त भएनन्।
मिलान स्क्रिनियारको परिवार पुर्खाहरू र आफन्तहरूको सम्बन्धमा, उहाँका मातृ र बुवा हजुरबा हजुरआमाको कुनै रेकर्ड छैन। यसै गरी धेरै उनको Skriniar काका, काकी र काकाजी को बारेमा चिनिएको छैन। विकास बोर्ड उनको भतिजो र भतिजीहरु पनि जान्छ।
मिलान Skriniar व्यक्तिगत जीवन:
उसको व्यक्तित्व परिभाषित गर्ने गुणहरू बोल्नुहोस्, के तपाईंलाई थाहा छ कि ऊ जोश, फोकस र नम्रताले चालित छ? थप रूपमा, केन्द्र फिर्ता महत्वाकांक्षी र कडा परिश्रम गरीरहेको छ एक्वेरियस राशिफल साइन अन्तर्गत व्यक्तिको जस्तो।
जब मिलान प्रशिक्षण वा फुटबल खेलिरहेको छैन ऊ केहि चासो र शौकहरु संलग्न गरेको पाउन सकिन्छ। ती पढ्न, भिडियो खेल खेल, यात्रा र आफ्नो परिवार र साथीहरू संग राम्रो समय खर्च समावेश छ।
मिलान स्क्रिनियारको जीवनशैली:
केन्द्रीय डिफेन्डरको २०२० सम्म4मिलियन यूरोको अनुमानित कुल सम्पत्ति छ। खेलाडीको धनमा योगदान पुर्‍याउने आम्दानीका स्ट्रीमहरू ज्याला र तलब हुन् जुन उसले एक अद्भुत केन्द्रको रूपमा फिर्ता पाएको हो।
फुटबल प्रतिभाले अनुमोदनहरूको माध्यमबाट पनि धेरै कमाउँछ। ठूलो धनको साथ एक विलासी जीवन शैली आउँछ। मिलानका लागि, विलासी जीवनशैली डिलक्स अपार्टमेन्टमा बस्नु, विदेशी कारहरू चलाउनु र महँगो रिसोर्टमा क्वालिटी समय खर्च गर्नु समावेश छ।
मिलान Skriniar तथ्यहरु:
हाम्रो बाल्यकाल कहानी र जीवनी तथ्या .्कहरू समेट्नको लागि, यहाँ केन्द्रको पछाडि कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १ - फिफा २०२० श्रेणीकरण:
के तपाईंलाई थाहा छ मिलन स्क्रिनियारको फिफा समग्र IF points अ fair्क छ? यस्तो श्रेणीको साथ, उनी बराबरीमा मात्र short पोइन्ट छोटो छ वीरजी भ्यान डिजक भन्दा राम्रो एक बिन्दु निक्लास सुले जसको 85 XNUMX अ of्कको रेटिंग छ।
तथ्य #2- मिलान Skriniar धर्म:
धेरै शोध पछि, हामी यस मा एक निष्कर्षमा आएका छौं। सत्य कुरा के हो भने, स्क्रिनियारले अभ्यास गरेको धर्मको निर्धारण गर्न यो विशेष गरी गाह्रो छ किनकि उसले कुनै पनि बुँदालाई छोडेको छैन। वास्तवमा, ठूलो प्रश्न के हो भने केन्द्र फिर्ता एक विश्वासी हो कि होइन।
तथ्य #3- मिलान Skriniar को घरपालुवा:
सबै भन्दा फुटबल प्रतिभा जस्तै, फुटबलर जहिले पनि घर पुग्ने संग आफ्नो घरपालुवा कुकुर संग एक न्यानो स्वागत हुन्छ। प्यारा सानो सेतो प्राणी मिलनको साथ वर्षौं भइसक्यो र अक्सर ऊसँगै इन्स्टाग्राम फोटोहरूमा देखा पर्दछ।
पुरा नाम मिलान Škriniar
जन्म मिति फेब्रुअरी १ ​​th day day १ 11
जन्मस्थान Slovakiar nad Hronom स्लोभाकियामा
प्ले गर्दै केन्द्र फिर्ता
आमाबाबुले Íubomír rinkriniar (पिता)
भाई बहिनीहरू Nil
प्रेमिका बारबोरा ह्रोन्सेकोवा
तलब १. 5.5 मिलियन यूरो
नेट मूल्य १.4मिलियन यूरो
उचाइ Feet फिट २ ईन्च।
बॉयहुड क्लब Žiar नाद Hronom
सोख रिडि।, भिडियो खेलहरू खेल्दै, यात्रा र उसको परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने।
पाल्तु जनावर र कुकुर
मिलान Skriniar को जीवनी मा हाम्रो आकर्षक लेखन पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी विश्वास गर्छौं कि अब उहाँ को हो र उनी कता टाढा फुटबलको संसारमा आइपुगेको छ भनेर उहाँलाई थाहा छ र त्यसको कदर गर्दछौं। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले सामग्रीहरू फेला पार्नुभयो जुन हामीले उसको बारेमा निष्पक्ष र सत्य हुन भनेर राख्यौं? यदि होईन भने, कृपया हाम्रो ध्यान को लागी कुनै कुरा मा आकर्षित गर्नुहोस् जुन टिप्पणी बाकसको प्रयोग गरेर सही देखिएन।
मार्सेलो ब्रोजोविक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
निकोकोलो ज्यानोलो बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
शमूएल एटोओ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
लियोनार्डो बोक्ची बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
Mateo Kovacic Childhood Story Plus Untold Biography Facts
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
डेनिस Bergkamp बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य